CSO Registration – The best is yet to come | Local Resources Centre
CSO Registration – The best is yet to come
Khaing Pwint Aung Wednesday, September 26th, 2018
မန္တလေးတွင် နေသာသောနေ့ တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ ဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ မန်နေဂျာဖြစ်သော ဦးမြင့်ထွန်းကို ဖွံဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သားများက ရုံးတွင် စောင့်နေကြသည်။ ဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ လွယ်ကူစွာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေးအတွက် တတ်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ဦးမြင့်ထွန်းသည် ပျော်ပျော်နေတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အပြုံးမျက်နှာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်သည်။
ဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျှတသော၊ တာဝန်ခံယူမှုရှိသော အရပ်ဘက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု စီမံကိန်း၏ အသေးစားရန်ပုံငွေကိုရရှိထားသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်သည်။ ဦးမြင့်ထွန်းက “အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တရားဝင်ပြဌာန်းပြီးသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတို့မှာ သိရှိမှုအားနည်းနေသေးသည်။” အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများက ထိုဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုက်နာမှုအားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထိုဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားသည့် အရာတစ်ခုမှာ မြို့နယ်အဆင့်၊ တိုင်းအဆင့် မှတ်ပုံတင်ရေးကော်မတီတွင် အသင်းအဖွဲ့များကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမည်ဟုဆိုသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါ။ ထို့ပြင်သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့က အသင်းအဖွဲ့များအား သာရေးနှင့်နာရေးလုပ်ဆောင်သောအဖွဲ့များကိုသာ မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးကြောင်း ပြောကြားခြင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ ထိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၏ အရေးပါပုံနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးပါပုံကို သိရှိမှု အားနည်းနေသေးသည်။
ဦးမြင့်ထွန်းဆက်လက်ပြောကြားသည်မှာ ဥပဒေရေးရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ မန္တလေးတွင် အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ ဤဥပဒေကို ပိုမိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအား မြို့နယ်အလိုက် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအဖွဲ့များထံမှ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ခက်ခဲသည့်အပိုင်းများအား မေးမြန်းခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ၄င်းမှရရှိထားသောအချက်များအား စုစည်းပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်အဖြေရှာခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲမှာ အသင်းအဖွဲ့များကိုယ်တိုင်က အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအား သိရှိမှုအားနည်းခြင်း။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှလည်း အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေအား သိရှိမှုအားနည်း ခြင်း။ အစိုးရအဖွဲ့များမှ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ထိတွေ့ရန်ခက်ခဲနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှာ PEACE စီမံကိန်း၏ အသေးစား ရန်ပုံငွေကိုရရှိထားသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အဖွဲ့သည် အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ဥပေဒေနှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများပေးခြင်း၊ ဥပဒေတွင်ပါဝင်သော အားနည်းချက်များကို အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မူဝါဒရေးရာလုပ်ဆောင်သောသူများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းများလည်းပြုလုပ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် မန္တလေးတွင် အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သောဗဟုသုတများရရှိလာသည်။ ထို့ပြင် အရင်ထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်မှုများချောမွေ့လာသည်။
နိဂုံးချုပ်ရာတွင် ဦးမြင့်ထွန်းက ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသော ဥရောပသမ္မဂ္ဂ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ် သောHELVETAS မြန်မာ၊ PTF နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့တို့ကို ဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားသွားပါသည်။
It was sunny day in Mandalay. We were waiting in the private room of LRC office to meet U Myint Htun,aProject Manager of Enabling Legal Environment (ELE) Working Group. ELE working group is actively working towards implementation of the 2014 Association Registration Law (ARL) to make sure the CSOs can easily register officially without any barriers.
U Myint Htun ,avery pleasant person withabig smile, entered into the room and we warmly welcomed him.
ELE Working Group is one of the grant awardees under PEACE project. He tookabreak forawhile before starting to talk about the situation of the CSO registration in Mandalay region. He said, “Although Association Registration Law has been enacted, government and CSOs have limited knowledge about it because of lack of law enforcement communication gap among respective government departments in Mandalay”.
As stipulated In the Association Registration Law (ARL), for township and state level implementation, Association Registration Law Committee selection process should include members of CSOs, but in reality, the CSOs members did not get the chance to participate in the selection process. And also, the respective government officials themselves seem to have limited knowledge of the law and also weak into abiding some components of the law. Many CSOs tried to register but the Regional Government only permitted CSOs who work on Social/Humanitarian work to be officially registered. The Regional Government have limited knowledge on development work and the important and critical role that civil society play inademocracy and reform processes.
He also mentioned that ELE working group is mainly focusing on ensuring and facilitating the implementation process of ARL in Mandalay. ELE working group members have also interviewed those who are facing difficulties in the registration process. After collecting evidence, ELE collected the facts and advocated with regional government Mandalay Region Hlutttaw and CSOs.
However, the biggest challenges were that CSOs and government departmental officials have limited knowledge of ARL and they lack engagement with CSOs.
ELE Working Group were successful in applying for small grants programme under PEACE project. The additional support had enabled the ELE working group to provide awareness on ARL and able to explain about the weakness of implementation of the law with many CSOs and policymakers. Moreover, they gained many valuable experiences and skills in financial management and reporting.
The ELE working group had impacted in increasing knowledge on ARL and its implementation process, much to the delight of the CSOs in Mandalay who have faced difficulties in registering in the past.
He concluded, “On behalf of CSOs in Mandalay, we would like to thank the European Union for providing the funds and the consortium partners of PEACE project – HELVETAS, PTF and LRC for creating an enabling environment to bring the best to the CSO community”.